Izinto eziluncedo kunye neempawu ze-polyurethane insulated steel pipe
1. Ukunciphisa iindleko zeprojekthi
2. Ukulahleka kobushushu obuphantsi kunye nokonga amandla
I-thermal conductivity ye-polyurethane yile: λ= 0.013-0.03kcal / m · h · OC, ephantsi kakhulu kunezinye izinto ezisetyenziswa ngokuqhelekileyo kwimibhobho yokufakelwa kwezinto ezidlulileyo, kunye nefuthe le-insulation liphuculwe ngamaxesha angama-4 ~ 9. Ngaphezu koko, ukufunxa kwawo amanzi kuphantsi kakhulu, malunga ne-0.2kg/m2. Isizathu sokufunxa kwamanzi aphantsi kukuba i-polyurethane foam ine-porosity evaliweyo malunga ne-92%. I-conductivity ephantsi ye-thermal kunye nokufunxwa kwamanzi aphantsi, kunye ne-thermal insulation layer kunye ne-high-density polyethylene okanye iqokobhe elikhuselayo le-FRP elinokusebenza kakuhle kwamanzi ngaphandle, zitshintshe imeko "yokunxiba ijacket emanzi yomqhaphu" yomsele wendabuko obeka umbhobho wokuhambisa ubushushu, kwaye kakhulu. yehlisa ilahleko yobushushu iyonke yombhobho wonikezelo lobushushu. Ilahleko yobushushu bothungelwano lobushushu yi-2%, engaphantsi kakhulu kunemfuno yemigangatho yehlabathi ye-10%.
3. I-Anti corrosion, i-insulation efanelekileyo kunye nobomi benkonzo ende
Ngenxa yokuba i-polyurethane eqinile ye-foam insulation layer ibotshelelwe ngokuqinileyo kwisikhumba sangaphandle sombhobho wensimbi, ukungena komoya kunye namanzi kunokwahlukaniswa, kwaye umphumo omuhle we-anticorrosion unokufumaneka. Kwangaxeshanye, imingxunya yayo enogwebu ivaliwe kwaye ukufunxa kwayo kuncinci kakhulu. Igobolondo le-polyethylene yoxinaniso oluphezulu kunye neqokobhe le-FRP zine-anti-corrosion elungileyo, i-insulation kunye ne-mechanical properties. Ngoko ke, ulusu lwangaphandle lombhobho wensimbi osebenzayo kunzima ukuchithwa ngumoya wangaphandle kunye namanzi. Ngethuba nje umgangatho wamanzi wangaphakathi wombhobho uphathwa kakuhle, ngokweenkcukacha zangaphandle, ubomi benkonzo bunokufikelela ngaphezu kweminyaka engama-50, eyi-3 ~ 4 ixesha elide kunelo lokubeka umsele wendabuko kunye nokubekwa phezulu.
Izinto eziluncedo kwi-prefabricated ngqo kungcwatywa insulated umbhobho yentsimbi
Xa kuthelekiswa nendlela yokugquma umbhobho wentsimbi yemveli, umbhobho wentsimbi ongcwatywe ngokuthe ngqo uneenzuzo ezibalaseleyo:
1.Umbhobho wentsimbi ofakwe ngaphambili owangcwatywayo awudingi kwakha umsele omkhulu, kodwa ufuna ukungcwaba umbhobho ogqunyiweyo ngaphantsi komhlaba, nto leyo inciphisa kakhulu ukuhlaliswa komhlaba weprojekthi, ilungele ukukhuselwa kokusingqongileyo, inciphisa inani lokwembiwa komhlaba ngokungaphezulu. ngaphezu kwama-50%, kwaye yehlisa isixa sobume bezakhiwo kunye nekhonkrithi ngama-90%. Ngexesha elifanayo, ukwakhiwa kombhobho we-insulation kwenziwa ngokuhambelana ne-trenching kwi-site, kwaye kuphela i-joint kwi-site efunekayo, enokunciphisa ixesha lokwakha ngaphezu kwe-50%.
2.Ukusebenza kokugcina ubushushu kulungile, kwaye ilahleko yobushushu yi-25% kuphela yemibhobho yemveli. Ukusebenza kwexesha elide kunokonga amandla amaninzi kwaye kunciphise kakhulu iindleko zamandla.
3.Inamandla okumelana namanzi kunye nokumelana nomhlwa. Akufuneki ukuba uqhoboshele umsele wombhobho. Inokungcwatywa ngokuthe ngqo emhlabeni okanye emanzini. Ulwakhiwo lulula kwaye lukhawuleza, kwaye iindleko ezibanzi ziphantsi.
4. Ikwanayo nokumelana nokudleka okulungileyo kunye nokumelana neempembelelo phantsi kweemeko zobushushu obuphantsi, kwaye inokungcwatywa ngokuthe ngqo kumhlaba onomkhenkce ongaphantsi komhlaba.
5.Ubomi benkonzo bunokufikelela kwi-30-50 iminyaka. Ufakelo oluchanekileyo kunye nokusetyenziswa kunokwenza iindleko zokugcinwa komnatha wombhobho ziphantsi kakhulu.
6. Inkqubo ye-alamu inokusetwa ukuba ibone ngokuzenzekelayo impazamo yokuvuza komnatha wombhobho, ibonise ngokuchanekileyo indawo yempazamo kunye ne-alamu ngokuzenzekelayo.
Ngaphambili: China thermal insulation steel pipe factory
Okulandelayo: Anti corrosion kunye thermal insulation steel umbhobho umenzi